"Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany (anatrehan’Andriamanitra); fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imason’Izay iafaran’ny ataontsika." Hebreo 4:13
"Fa eo imason’i Jehovah ny alehan’ny olona, ary ny diany rehetra dia dinihiny avokoa." Ohabolana 5:21
Androany maraina dia reko tamin’ny fampielezampeo fa nisy ministra iray teo aloha, nantsoina mba hanao tatitra momba ny asany. Nony mitataovovonana, dia nisy solombavambahoaka miray vondrona pôlitika aminy, nitondra fanazavana fanampiny: "Fanadihadiana tsotra no natao tamin’ilay ministra; midika fotsiny izany fa tsy maintsy mamaly ireo fanontaniana vitsivitsy apetraky ny mpitsara izy. Amin’izao ora izao izy dia tsy meloka."
Marina tokoa fa araka ny lalàna dia lazaina fa tsy meloka ny olona iray, raha mbola tsy nohelohin’ny fitsarana. Fa raha manao zavatra tsy ara-dalàna kosa isika, dia meloka, na hitan’ny fitsaran’olombelona izany na tsia. Mety tsy ho hita mihitsy ilay fahadisoana, ary tsy ho voaporofo na oviana na oviana; na izany aza anefa, dia efa natao io fahadisoana io.
Ny zava-dehibe, hoy ny sasany, dia rehefa tsy tratra. Saingy tsy fijeren-davitra izany ! Satria indray andro any, “ny atao rehetra dia hoentin’Andriamanitra ho amin’ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy” (Mpitoriteny 12:14). “Izy (Andriamanitra) efa nanendry andro iray, izay hitsarany izao tontolo izao amin’ny fahamarinana” (Asan’ny Apostoly 17:31).
Mbola ho avy io andro io, ary tsy maintsy ho tonga, ka ho rariny ny didim-pitsarana. Izany no maha tena maika ny hamitranam-pihavanana amin’Andriamanitra. Nanome toky Izy fa hamela heloka sy hanadino ny fahadisoan’izay rehetra mibebaka sy mino an’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy no nanefa ny saran’izany famelan-keloka izany, tamin’ny nanolorany ny ainy ho antsika rehetra, izay olona meloka.
Aza mangataka andro, miaiky ny fahadisoanao, ary raiso ny famotsoran-keloka atolotra anao!